EVY's Kitchen: Breakfast
This the breakfast that I prepared for my hubby today..After looking at Baking Mum's blog, I've got an idea of making this. Preparation steps are quite easy. First, cut the cheese slice into4small pieces and place it on the bottom bread as below.
Remove the center portion of the top bread and place it on the bottom bread. Place the egg in the middle square and toast it in 180 degree C preheated oven for about 15 minutes (You can adjust the timing for your preference color and crispiness of the bread). Sprinkle with some black pepper andapinch of salt. Ready to serve. Enjoy!
Posted by Evy at 4:38 PM
Whatagreat idea.... and so darn easy.
ချစ်စရာလေးရယ်... သမီးလေးကိုကျွေးရင် ကြိုက်မှာသေချာတယ်....
စုဘူး-စားလို့ကောင်းတယ်။ လုပ်ရတာလဲ အရမ်းလွယ်တယ်။
Hi Moogie => Yes ,it was very very easy to make.
Ma Sharon=> ပြန်ရောက်ပြီလား။ မတွေ့တာတောင်ကြာပေါ့။
ဆနွင်းမကင်းအဆင်ပြေသွားပြီ။ ရွေကြည်မတူလို့ ပုံစံမတူဘူး။
ဒီမှာရတာတွေက မှုန့်ညက်နေတာ။ စားလို့တော့ ကောင်းသွားပြီ။
ThuHninSee ဟုတ်လား အဆင်ပြေသွားပြီလား။ ကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်။
ဒီနေ့ ပေါင်မုန့်ကို အဲလိုလုပ်စားတယ်။ ကြက်ဥကျက်တဲ့အထိထားတာ မီးများလို့ထင်တယ်။ ပေါင်မုန့် နည်းနည်းတူးသွားတယ်။ စားလို့တော့ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားက ကြိုက်တယ်တဲ့။ နောက်နည်းဆန်းလေးတွေ တင်ပါအုံး။ အားပေးနေတယ်။
မီးနဲနဲပြင်းလို့နေမှာနော်။ပေါင်မုန့်အနားသားလေးတွေကို ထောပတ် သို့မဟုတ် mayonnaise နဲနဲသုတ်ပြီးမှကင်ရင် မကျွမ်းတော့ဘူး။
I also will try it for my hubby :)